रोक्न सकेनन् आँशु : कोरोना संक्रमित अमिताभलाई अचानक के भयो ? – Khabar PatrikaNp
रोक्न सकेनन् आँशु : कोरोना संक्रमित अमिताभलाई अचानक के भयो ?
July 28, 2020 174
कोभिड १९ परीक्षणमा बुहारी ऐश्वर्या र नातिनी आराध्याको नेगेटिभ रिजल्ट आएपछि उनीहरुलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरिदिएको छ । अमिताभले ट्वीटर मार्फत त्यसको जानकारी गराएका छन् । बुहारी ऐश्वर्या र नातिनी आराध्यले कोरोना जितेको प्रति उनले खुसी ब्यक्त गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । उनले खुशी र राहत मिलेको भन्दै सोसल मिडियामा पोस्ट गरेका गरेका हुन्।
आफ्नो नातिनी र बुहारी अस्पतालबाट घर फर्केकको खुशीमा आफूलाई रोक्न नसकेको भन्दै उनले इन्स्टाग्राम त्यसवारे पोष्ट गरेका हुन् । उनले यसका लागि भगवानलाई धन्यवाद दिएका छन्। खुसीका कारण आँशु झर्नबाट रोक्न नसकेको पनि उनले बताएका छन् । लामो समय देखि अस्पतालमै रहेका अमिताभले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा पनि सुभेक्छुकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिने गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमित भएका कारण एश्वर्याका पति अभिषेक पनि अहिले अस्पतालमै छन् । उनले पनि पत्नी र छोरीले कोरोनालाई पराजित गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालवाट यसवारेमा जानकारी दिएका थिए । उनी पनि अस्पतालवाटै सामाजिक सञ्जालमा सकृय छन् । अभिषेक बच्चनले सबै समर्थकलाई शुभेच्छाका लागि धन्यवाद दिएका छन्। ुउनीहरु दुवै अब घरमा हुनेछन्। म र बुबा (अमिताभ) उपचारका क्रममा अझै अस्पतालमा नै छौं,ु अभिषेकले भनेका छन्।
यस अघि भारतीय मिडियामा अमिताभ र उनको छोरा अभिषेकले कोरोना जितेर डिस्चार्ज हुन लागेको भन्दै समाचार आएपछि उनीहरुले त्यसको खण्डन गरेका थिए । अमिताभले समाचारको लिंक शेयर गर्दै यो झुटो भएको बताएका थिए । अमिताभ र उनको परिवारको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै भारतका विभिन्न स्थानमा पुजा समेत लगाइएको छ ।
Prevदुबै मृगौला फेल भएकि खिम माया आलेले भनिन: मलाई सहयोग गरिदिनुहोस
Next१०३ वर्षका वृद्धले गरे कोरोना जितेर घर फर्केपछि पाँचौ विवाह
१० वर्षीय बालकले गरे आ’त्म ह’त्या, यस्तो छ उनको दुः,खदायी कथा पुरा पढ्नुहोस र सेयर गर्नुहोस
कुलमानलाई सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला सरकारले दिएको छैन : सरकारका प्रवक्ता
एकजना बेवारिसे महिला संक्रमण सार्ने माध्यम बन्नसक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्
शनिबारको दिन भुलेर पनि यि काम कहिल्यै नगर्नुहोस्….
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34222)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (34073)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20260)